ရှိန်ကတော့ စာအုပ်လေးဖတ်ပြီးကိုယ်အနားကပ်တဲ့ 💗💗💗 ခွေးလေးတွေအရမ်း ချစ်တတ်တယ်ရှိန့်လိုပဲ ရှိန့်သဲလေးတွေရော ခွေးချစ်တတ်ကြလား ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်…. – Shwe Naung
ရှိန်ကတော့ စာအုပ်လေးဖတ်ပြီးကိုယ်အနားကပ်တဲ့ 💗💗💗 ခွေးလေးတွေအရမ်း ချစ်တတ်တယ်ရှိန့်လိုပဲ ရှိန့်သဲလေးတွေရော ခွေးချစ်တတ်ကြလား ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်….
N N | June 29, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ်ပ ရိသတ်ကြီးရေ သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတ ဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ် ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် ကို သိကြမယ်ထ င်ပါတယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေးတွေနဲ့ ပုရိသ တွေရဲ့
ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့အတူ လှပ ကြည်လင်တဲ့ အသား အရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး သူမရဲ့ အမိုက် စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူ လေးလ ည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက် စားပုံရိပ်နဲ့ အင်တာဗျူး များစွာ ကိုလည်း လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာ လည်းတွေ့ရ ပါတယ်။ လတ်တလော မှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှတရား တွေနဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစားထားတဲ့
အလန်းစား ပုံလေး ကိုဖော်ပြ ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးဟာ ကြည့်ရှုသူ တွေများပြား ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံနေရတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခု အခါမှာဗတာ့ သူမက ပုံလေးထဲမှာ ဆွဲဆောင် မှုမှုရှိရှိ နဲ့ လှရက် လွန်းနေပြီး ပုံတွေကို ပရိသတ် ကြီးကို အတွက် တင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။အားတဲ့ရက် လေးတစ်ရက် စာအုပ်လေးဖတ် ပြီးကိုယ် အနားကပ်တဲ့ သူတို့ လေးတွေနဲ့ပဲ အချိန် ပေးပျော်အောင် နေရတယ် 🤍🤍🤍ရှိန်ကတော့ ခွေးလေးတွေ အရမ်းချစ်တတ်တယ်
ရှိန့်လိုပဲ ရှိန့်သဲ လေးတွေရော ခွေးချစ်တတ်ကြလား❔❓⁉️သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှ ကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင် ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားနေတာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ် ကြီးလည်း ဝင့်ထည် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှု နိုင်စေ ရန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နာမည်ကြီး နေတဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်များနဲ့ DJ SODA…
ပြေးရင်း အလှတွေနဲ့ GYMဆော့ရင်း အတွင်းသားတွေ လှလွန်း နေတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် ၏ ဗီဒီယို
လှနေ တဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်…
အတွင်းသား လေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..